Ny Semalt Expert Know How To Block Spam Referrer Amin'ny Faha-10 minitra
Hitady valiny mihoatra ny 500.000 ny fikaroham-bolana hitadiavana spam referamera. Lasa olana lehibe izany, ary manahy momba ny kaonty Google Analytics ny webmasters. Maro ny olona namoaka lahatsoratra, toro-làlana, ary mpitari-dalana momba ny fomba hanakanana ny spam referrer saingy ilainao tokoa ny loharanom-pahefana hanatsarana ny laharan'ny toerana ao amin'ny valin'ny fikarohana .
Raha tsy fantatrao ny areti-nay antsoina hoe spam referral, dia i Frank Abagnale, manam-pahaizana ambony indrindra Semalt , no manome toky fa ity dia spam natahotra izay tsy mitsidika ny tranonkalanao fa hita foana ao amin'ny kaontinao Google Analytics amin'ny endritsoratra.
Ny tranonkalan'ny fitsangatsanganana dia natao hanakanana ny kaonty Google Analytics ary manondro ny rohy referral avy amin'ny tranonkala amin'ny zavatra fantatra amin'ny anarana hoe spambots - kanger kbox mini 75w. Ny bug-for-website, free-social-buttons.xyz, ary darodar.com no sasany tamin'ireo mpamono vava. Ireo sehatra rehetra ireo dia hipoitra ao amin'ny tatitra Google Analytics ary manantena fa hitsidika ny rohy mifandray aminy ianao.
Misy antony roa lehibe mahatonga ny spam referansy ho olana lehibe. Voalohany indrindra, miahiahy izy ireo, ary ny hitsikitsika manova ny angona Google Analytics. Ny tranonkala mionona toa an'i Mr. Porter sy ny BBC dia tsy voafandrika amin'ny spam referral rehefa mahazo mpitsidika maro isanandro..Mifanohitra amin'izany, ny tranokala sy ny bilaogy izay vao haingana dia mety hahazo efapolo sy dimampolo sessions isan'andro. Fiantraikany goavana amin'ny famakafakana ara-barotra ary mety hanimba ny kalitao amin'ny fifamoivoizana an-tserasera amin'ny ankapobeny. Ny faharoa dia ny fitsidihan'ny fitsidihana spam hikaroka ireo server sy loharano amin'ny zavatra tsy fantatrareo akory. Ny tena zava-dehibe dia tsy ho fantatrao raha toa ka hita ao amin'ny kaonty Google Analytics anao ny spam referanso raha toa ka voarakitra araka ny tokony ho izy foana ny hitsiny.
Ahoana no hanakanana ny spam referendra ao amin'ny Google Analytics:
Azonao atao ny manakana ny spam referansy ao amin'ny kaonty Google Analytics amin'ny fomba tsotra.
Dingana # 1 - Mandehana any amin'ny sehatry ny Admin> Filterno ao amin'ny tontolon'ny Google Analytics ary ampio filtre vaovao. Aza adino ny milaza ny sivananao toy ny darodar.com.
Dingana # 2 - Fidio ny anarana nomena anao raha vao nampidirina amina sivana ny tranokala ahiahiana. Manoro hevitra anao izahay hametraka ny anaran'ny sehatra miaraka amin'ny subdomains amin'ny sivana iray.
Dingana # 3 - Aza hadino ny mamonjy ny fanovana alohan'ny hanakatonanao ny varavarankely. Azonao atao ny mamerina mamaky ny dingana ho an'ny sehatra vaovao na sehatra vaovao.
Tokony hotadidinao fa raha mampihatra ireo segondra samihafa amin'ny tatitra ianao, dia tsy hampiditra ny spam referanso izy ireo ary tsy maintsy ampidirinao manokana. Ampiasao ny safidy segondra raha tsy tianao ny manaisotra ny ankamaroan'ny tranonkalan'ny fitsaboana amin'ny tranokala lehibe. Amin'izao fotoana izao, tsy misy vahaolana azo raisina amin'ny valiny marina 100% raha ny ankamaroan'ny fomba fiasa azo antoka hanakana ny solosaina afa-tsy 99%. Raha toa ka tsy miasa ho anao ireo vahaolana ireo, tsara kokoa ny manova ny rakitra htaccess anao na mitady vahaolana hafa amin'ny media sosialy.